Fanasan'ny Tompo | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Ny Fanasan'ny Tompo dia mampahatsiahy izay nataon'i Jesosy taloha, tandindon'ny fifandraisantsika aminy ankehitriny, ary fampanantenany izay hataony amin'ny ho avy. Isaky ny mankalaza ny fanasan'ny Tompo isika dia mandray mofo sy divay hahatsiarovana ny Mpamonjy antsika ary hanambara ny fahafatesany mandra-piaviny. Ny Fanasan'ny Tompo dia mandray anjara amin'ny fahafatesana sy fitsanganan'ny Tompontsika, izay nanome ny vatany ary nandatsaka ny rany mba hahazoantsika famelana. (1 Korintiana 11,23: 26-10,16; 26,26:28; Matio)
Ny fanasan'ny Tompo dia mampatsiahy antsika ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana
Ny hariva, rehefa namadika izy, raha vao niara-nisakafo taminy sy i Jesosy, dia nandray mofo izy ary niteny hoe: "Ity no tenako izay omena ho anao; izany no tadidiko » (Lioka 22,19). Samy nihinana mofo iray izy rehetra. Rehefa manatrika ny Fanasan'ny Tompo isika tsirairay dia mihinana sombin-mofo iray ho fahatsiarovana an'i Jesosy.
"Tahaka izany ihany koa, ny chalice aorian'ny sakafo dia hoy izahay: ity chalice ity dia ilay fanekena vaovao amin'ny rako izay aidina aminao." (V. 20). Rehefa misotro divay kely mandritra ny sakramenta isika, dia tsaroantsika fa ny ran'i Jesosy dia natokana ho antsika, ary io ra io dia nanambara ny fanekena vaovao. Tahaka ny nametahana ny fanekena taloha tamin'ny alàlan'ny fandatsahan-dra, ny fanekena vaovao dia naorina tamin'ny ran'i Jesosy (Hebreo 9,18: 28).
Araka ny nilazan'i Paoly hoe: "Isaky ny mihinana amin'ity mofo sy misotro ity rà ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-pihaviny." (1 Korintiana 11,26). Ny Fanasan'ny Tompo dia miverina mitodika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana.
Mety ve ny fahafatesan'i Jesosy? Misy lafiny mampalahelo tokoa amin'ny fahafatesany, fa ny sary lehibe kokoa dia ny fahafatesany no vaovao tsara indrindra ao. Mampiseho antsika ny halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika - be loatra ny nanirahany ny zanany hamonjy antsika, mba ho voavela ny fahotantsika ary afaka miaina miaraka aminy mandrakizay isika.
Ny fahafatesan'i Jesosy dia fanomezana lehibe ho antsika. Sarobidy io. Raha omena fanomezana sarobidy lehibe isika, dia fanomezana iray izay misy sorona lehibe ho antsika, ahoana no fomba handraisantsika azy? Miaraka amin'ny alahelo sy ny nenina? Tsia, tsy izany no tadiavin'ny mpanome. Fa kosa, tokony hanaiky izany amim-pankasitrahana lehibe isika, ho fanehoana fitiavana lehibe. Raha mitomany isika, dia tokony ho ranomasom-pifaliana.
Ka ny Fanasan'ny Tompo, na dia fahatsiarovana ny fahafatesana aza izany, tsy mba fandevenana toy ny hoe mbola Jesosy dia mbola maty. Mifanohitra amin'izany, mankalaza izany fahatsiarovana izany isika satria fantatsika fa telo andro monja ny fahafatesan'i Jesosy - satria fantatsika fa tsy haharitra antsika mandrakizay ny fahafatesana. Faly isika fa nandresy ny fahafatesana i Jesosy ary nanafaka izay rehetra andevo noho ny tahotra ny fahafatesana (Hebreo 2,14: 15). Tsaroantsika ny fahafatesan'i Jesosy niaraka tamin'ny fahalalana mahafaly fa nandresy ny ota sy ny fahafatesana izy! Nilaza i Jesosy fa hivadika ho fifaliana ny alahelontsika (Jaona 16,20). Ny fahatongavan'ny latabatra an'ny Tompo sy ny fiarahana dia tokony ho fankalazana fa tsy fandevenana.
Ny Isiraelita fahiny dia nitodika ny zava-nitranga tamin'ny Paska ho fotoana voafaritra amin'ny tantarany, ny fotoana nanombohan'ny maha-firenena azy ireo. Tamin'ny fotoana nanalasan'ny tànana mahery an'Andriamanitra ny fahafatesana sy ny fanandevozana ary nafahana hanompo ny Tompo. Ao amin'ny Fiangonana Kristiana dia mitodika ny zava-nitranga manodidina ny fanomboana sy nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ho fotoana voafaritra eo amin'ny tantarantsika. Mandositra ny fahafatesana sy ny fanandevozana amin'ny ota isika, ary afaka amin'ny fanompoana ny Tompo. Ny Fanasan'ny Tompo dia fahatsiarovana io fotoana voafaritra io teo amin'ny tantarantsika.
Ny Fanasan'ny Tompo dia manambara ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao
Ny dikan-hazofijaliana an'i Jesoa dia misy dikany mitohy ho an'izay rehetra nanao hazofijaliana hanaraka azy. Mbola manohy mizara amin'ny fahafatesany sy ny fanekena vaovao isika satria mizara amin'ny fiainany isika. Nanoratra i Paoly hoe: "Ny kaopy feno fitahiana izay isaorantsika dia tsy ny firaisana amin'ny ran'i Kristy ve? Moa ve ny mofo dia manimba ny vatan'i Kristy isika? » (1 Korintiana 10,16). Amin'ny alàlan'ny Fanasan'ny Tompo dia mampiseho isika fa manana an'i Jesosy Kristy. Manana fihavanana Aminy isika. Isika tafaray aminy.
Ny Testamenta Vaovao dia miresaka ny fandraisantsika an'i Jesosy amin'ny fomba samy hafa. Miombona amin'ny hazo fijaliana isika (Galatiana 2,20; Kolosiana 2,20), ny fahafatesany (Romana 6,4), ny nitsanganany tamin'ny maty (Efesiana 2,6; Kolosiana 2,13; 3,1) sy ny fiainany (Galatiana 2,20). Ao aminy ny fiainantsika ary ao amintsika Izy. Ny Fanasan'ny Tompo dia tandindona izany zava-misy ara-panahy izany.
Ny Toko faha-6 ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona dia manome sary mitovy amin'izany amintsika. Rehefa avy nanambara ny tenany ho "mofon'ny fiainana" i Jesosy dia hoy izy: "Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay, ary hatsangako amin'ny andro farany izy". (Jaona 6,54). Tena zava-dehibe ny ahitantsika ny sakafo ara-panahy ao amin'i Jesosy Kristy. Ny Fanasan'ny Tompo dia mampiseho ity fahamarinana mitohy ity. «Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary Izaho ao aminy» (V. 56). Asehonintsika fa miaina ao amin'i Kristy ary Izy ao amintsika.
Ka ny Fanasan'ny Tompo dia manampy antsika hiandrandra an'i Kristy, ka lasa mahafantatra isika fa ny fiainana tena izy ihany no afaka miditra sy mitoetra ao aminy.
Saingy rehefa tsapantsika fa velona ao amintsika i Jesosy dia mijanona sy mieritreritra izay karazana trano atolotra azy koa isika. Talohan'ny nahatongavany teo amin'ny fiainantsika dia fonenan'ny ota isika. Fantatr'i Jesosy izany talohan'ny nandondohany teo am-baravaran'ny fiainantsika. Tiany ho tafiditra izy vao afaka hanadio. Saingy nandondona teo am-baravarana i Jesosy, dia maro no manandrana manadio haingana alohan'ny hanokafana ny varavarana. Na izany aza, satria ny olombelona tsy afaka manadio ny fahotantsika - ny tsara indrindra azontsika atao dia ny manafina azy ireo ao anatin'ny efi-trano.
Ka manafina ny fahotantsika ao amin'ny efi-tranonao ary manasa an'i Jesosy ho any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Farany ao an-dakozia, avy eo amin'ny lalantsara, ary avy eo ao amin'ny efitrano fatoriany. Dingana tsikelikely izany. Farany i Jesosy dia tonga amin'ny efi-trano lemaka izay anafenana ny fahotanay ratsy indrindra ary manadio azy ireo ihany koa. Isan-taona rehefa mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika dia manolotra ny fiainantsika bebe kokoa amin'ny Mpamonjy.
Izy io dia fizotra ary misy ny Fanasan'ny Tompo manana andraikitra ao anatin'io dingana io. Nanoratra i Paoly hoe: "Ny olona hizaha toetra ny tenany, dia mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kapoaka ity" (1 Korintiana 11,28). Isaky ny mandray anjara isika dia tokony handini-tena, hahatsapa ny maha-zava-dehibe lehibe ato amin'ity lanonana ity.
Rehefa mizaha toetra ny tenantsika isika dia matetika no mahita ota. Ara-dalàna izany - tsy misy antony hialana amin'ny Fanasan'ny Tompo. Fampatsiahivana fotsiny izany fa mila an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika isika. Izy irery no afaka manaisotra ny fahotantsika.
Nanakiana ny Kristiana tany Korinto i Paoly tamin'ny fomba fankalazana ny Fanasan'ny Tompo. Ny olona mpanankarena dia tonga voalohany, nihinana ny voky ary nisotro mihitsy izy ireo. Ireo mpikambana mahantra dia nifarana ary nijanona ho noana ihany. Tsy mba nizara tamin'ny mahantra ny manankarena (And. 20-22). Tsy tena nizara ny fiainan'i Kristy izy ireo satria tsy nanao izay hataony. Tsy azon'izy ireo ny dikan'ny hoe rantsambatan'i Kristy ary samy manana andraikitra ny mambra rehetra.
Noho izany, eo am-panaovana fitiliana ny tenantsika, dia mila mijery ny manodidina isika raha mizaha ny fomba nandidian'i Jesosy Kristy antsika. Eny tokoa, raha tafaray amin'i Kristy ianao ary mitambatra amin'i Kristy, dia mifandray isika. Ka ny Fanasan'ny Tompo, tandindon'ny fandraisana anjara ataontsika amin'i Kristy, dia tandindon'ny fandraisana anjara ihany koa (ny dikan-teny hafa dia miantso izany hoe fiombonana na fizarana na vondron'olona)
Araka ny nolazain'i Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 10,17: "Satria misy mofo: dia tena iray ihany isika rehetra satria samy mandray mofo iray isika rehetra." Amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny Fanasan'ny Tompo, isika dia maneho fa ny tenantsika iray ao amin'i Kristy, mifamatotra, mifandraika amin'ny tsirairay.
Tamin'ny fisakafoanana farany niarahan'i Jesosy sy ny mpianany dia nasehon'i Jesosy ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny nanasana ny tongotry ny mpianatra (Jaona 13,1-15). Rehefa nanohitra i Petera dia nilaza i Jesosy fa ilaina ny manasa ny tongony. Ny fiainana kristiana dia misy ihany koa - manompo sy manompo.
Ny Fanasan'ny Tompo dia mampatsiahy antsika ny fiverenan'i Jesosy
Mpanoratra Filazantsara telo no milaza amintsika fa tsy hisotro amin'ny vokatry ny voaloboka intsony i Jesosy mandra-pahatongany ho feno amin'ny fanjakan'Andriamanitra (Matio 26,29:22,18; Lioka 14,25; Marka). Isaky ny mandray anjara isika dia ampahatsiahivina ny fampanantenan’i Jesosy. Hisy ny fanasana "fanasana lehibe", fanasana mariazy ". Ny mofo sy ny divay dia "santionany" amin'izay ho fankalazana fandresena lehibe indrindra amin'ny tantara. Nanoratra i Paoly hoe: "Fa isaky ny mihinana izany mofo sy misotro amin'ity kaopy ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-pihaviny." (1 Korintiana 11,26).
Miandrandra hatrany ny ao anatiny, na ao aoriana na ao anatiny, na ao anatiny na oviana na oviana. Ny Fanasan'ny Tompo dia tena zava-dehibe. Izany no antony nahatonga azy ho ampahany malaza amin'ny fomba nentim-paharazana kristiana nandritra ny taonjato maro. Mazava ho azy fa indraindray dia nihanalefaka tamin'ny fombafomba tsy misy aina izay fahazarana kokoa noho ny fankalazana doka lalina. Rehefa lasa tsy misy dikany ny fombafomba iray dia misy olona tafahoatra amin'ny fijanonana tanteraka ny fombafomba. Ny valiny tsara kokoa dia ny famerenany ny dikany. Izany no antony manampy azy io handinika indray ny zavatra ataontsika.